Bios Kuchengetedza | Yako nzvimbo yekudzivirira zvikanganiso uye chengeta PC yako yakachengeteka
Maitiro Eku backup uye Kudzoreredza Desktop Wallpaper mukati Windows 10
KB4464455 Windows 10 Shanduro 1809 Vaka 17763.107 - 13 Mbudzi 2018
Maitiro ekusarudza zuva rekumbomira kugadzirisa mukati Windows 10
Maitiro ekuverenga nekudyidzana neiyo skrini uchishandisa mbeva mukati Windows 10
Dhawunorodha Makanaka Norway Windows 10 theme
Maitiro Ekugadzirisa AsusTPcenter.exe Yakashata Mifananidzo MuWindows 10
Maitiro ekushandisa Ok Google zuva nezuva | Gadzirisa mudziyo wako nekukurumidza sezvinobvira
biosexpertopc 2022 2022 Leave mhinduro
Ok Google chishandiso chekushandisa zuva nezuva, kuburikidza nacho iwe unogona nyore kushandisa nharembozha yako, zvishandiso zvinoshandisa mubatsiri zvinoiswa mumhando mbiri: Zvishandiso zvinosanganisira ok google Zvishandiso izvo...
Maitiro ekuvhura iyo JNLP faira
biosexpertopc 2020 Leave mhinduro
Parizvino, chigadzirwa chemagetsi chine mafaera nemaapplication akagadzirwa mune akasiyana mafomati. Nekudaro, kana chirongwa chemuverengi chikashaikwa, hazvigoneke kuita mamwe mabasa kana kuona mamwe mafaera kubva pane yaunofarira web browser. Iyi ndiyo mamiriro nemafaira ...
Ungawana sei iyo IP kero yemunhu
Iwe pamwe pane imwe nguva wakaedza kutsvaga imwe IP kero uye hauna kubudirira. Nekudaro, neruzivo iwe rwaunoverengera muchinyorwa chino, iwe uchaziva nzira yekuwana IP yemumwe mumasekondi mashoma ...
Sei kunyora Wii mitambo
Mazuva ano, mazhinji emitambo yemavhidhiyo anopa vateveri vavo hutsva hwekuziva. Ndokunge, vanovatendera kuti vavandudze hunyanzvi hwakanangana nekugadziriswa kweruzivo, izvo zvinoreva kushandiswa kwekurangarira, kutarisisa, kuona, ...
Maitiro ekuomesa NTFS uchishandisa Mac OS komputa
Parizvino, pane akati wandei mafomati emadhiraidhi akaomarara uye ekuchengetedza zvikamu zveMac OS makomputa. Imwe yemaitiro akanyanya kushandiswa ndeye NTFS uye muchinyorwa chino tichataura nezvazvo. Tevere, isu tinotsanangura izvo ...
Ziva kana yakavharirwa nhamba yakakudana
Kana iwe ukazviwana iwe uchiverenga ichi chinyorwa, imo nekuti pane dzakawanda nguva iwe wakazvibvunza iwe unotevera mubvunzo: Ungaziva sei kana yakavharirwa nhamba yakandifonera? Neraki, nhasi uchawana mhinduro uye iwe unozogona kuziva dzimwe nzira dzese dzauinadzo ...
Maitiro ekukopa CD kuPC yako
Kuteedzera CD kuPc chaive chinhu chaiitwa kazhinji, nekuti pakanga pasina nzira zhinji dzekuchengetedza ruzivo. Nekudaro, sekushanduka kwezvinhu zvese, izvi zvakanganikwa nevamwe vanhu ...
Zvikumbiro zvekuteedzera mafoni kubva ku iPhone kuenda kuSIM
Kana uchida Export iPhone vokukurukura kuna SIM uye waona kuti hapana nezvechisarudzo ichi, unofanira kuziva kuti zvinokwanisika kuzviita nekuisa chikumbiro. Chinhu chakanakisa nezve iyi sarudzo ndechekuti iwe unogona kudzima iyo yakaiswa application kamwe ...
Maitiro ekubvisa Fortnite
Kana uchibvisa maapplication kubva pakombuta uye usingashandise maitiro akafanira, kazhinji pane mafaira akasununguka anotora nzvimbo uye anokanganisa mashandiro awo. Disincorporation yemavhidhiyo mitambo inowanzo kuunza iyi mamiriro, saka kana iwe uchida kusunungura Fortnite ita chokwadi ...
Maitiro ekuvandudza TomTom mepu yemahara
Navigation masisitimu emotokari ari kuramba achishandiswa pasirese, kuzadzikisa kudiwa uku kune zvakawanda zvinoshandiswa mumusika. Nekudaro, kune zvimwe zvekushandisa seTomTom iyo inonakidzwa nepamusoro ...
Maitiro ekugadzirisa TP-LINK Extender
Kana iwe uine TP-LINK Extender chishandiso uye iwe usingazive yekumisikidza, iwe uri munzvimbo chaipo, nekuti pano iwe unowana matanho ekutevera kuti uzviite. Paunenge uine nzvimbo mumba mako kana muhofisi uko isina waya Internet chiratidzo ...
Vhura kadhi rakachengetedzwa rakachengetedzwa
Parizvino, vanhu vazhinji vane dambudziko rekukopa uye kufambisa mafaera kuenda kuma micro SD makadhi. Izvi zvinokonzerwa nekudzivirirwa kwekunyora kunowanikwa nemidziyo yemagetsi iyi. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti ichi chinyorwa chekudzivirira chishandiso chekuchengetedza icho ...
Dhawunirodha Skype yemahara zviri nyore
Kana iwe uchitsvaga iyo App yekutumira mameseji uye kufona kubva kune ako madhivha, hapana zvirinani pane kurodha Skype mahara. Ndizvozvo, chishandiso ichi chave imwe yesarudzo dzakanakisisa dzekutaurirana nemhuri yako neshamwari uchishandisa iyo ...
Yakawanda yakashandiswa kunyorera kugadzira iyo Android Animoji
Kana iwe uine Android mudziyo uye iwe uchida kuziva kuti ungagadzira sei akasiyana Animoji nayo, uri munzvimbo chaiyo. Nekuti nhasi isu tichatsanangura akasiyana maficha aunogona kushandisa kuzviita. Saizvozvo, iwe unozodzidza matanho ...
Dzidza maitiro ekukopa DVD yakachengetedzwa
Kana wanga uchitsvaga nzira yekuteedzera DVD yakachengetedzwa kwenguva yakareba uye usati wabudirira, wasvika kublog rinoratidza. Nekuti nhasi uno unoziva zvirongwa zvakakosha kuti uzviite, kutanga nematurusi anonyanya kushandiswa muWindows ku ...
Maitiro ekudzima nhamba dzeSIM
Kana iwe wakaneta nekuve nenhamba dzefoni dzevanhu vausingachataure navo pafoni yako uye kunyangwe ukavadzima vanoramba vachioneka, pano iwe unowana mhinduro. Nekuti isu tichatsanangura maitiro aungaita kudzima SIM mafoni pane Android zvishandiso kubva ...
Maitiro ekuisa Kali Linux
Kana iwe wakaneta nekutsvaga maitiro ekuisa Kali Linux wauya kurudyi nzvimbo, nekuti mune ino chinyorwa uchaona maitiro ekuzviita. Nhasi, zvakajairika kune vashandisi vazhinji kuisa system yekushandisa pamakomputa avo kuti vaongorore kuchengetedzeka ...
Kuziva sei zuva rekutenga mbozhanhare
Kana pane dzakawanda nguva iwe wakatsvaga ruzivo rwekuti Ungaziva sei zera renhare? uye hauna kubudirira, nhasi une mhanza. Nekuti mune ino chinyorwa isu tichapindura iwo mubvunzo, tichikupa iwe zvese nezve dzimwe nzira dzakasiyana idzo ...
Dhawunirodha Jurassic World Evolution
Kana iwe uri mumwe wevanhu vanoda iyo Cretaceous era uye inofungidzira nema dinosaurs uye zvakare semitambo yemavhidhiyo, ichi chinyorwa ndechenyu. Munguva pfupi yapfuura, mutsva mutambo wevhidhiyo wakaburitswa, Jurassic World Evolution, iyo, ...
Maitiro ekurodha emahara mitambo paNintendo 3DS
Mazuva ano, kutamba mitambo yemavhidhiyo kuri kuwedzera uye kuwedzera mari nekuda kwekufambira mberi kwesainzi. Nekudaro, iwe haugone chete kubatsirwa kubva kune zvinogara zvichipiwa, asi zvakare zvinokwanisika kurodha akawanda emhando mitambo yemahara kuburikidza akasiyana siyana ...
peji 1 peji 2 ... peji 129 »
Mugadziri nehunyanzvi, anofarira zvemhando yepamusoro. Sezvo ini ndaive nemakore gumi nerimwe ekuberekwa ndichigadzira makomputa. Iwe unoda kuziva zvakawanda? Taura nesu
© Bios Kuchengetedza 2019
WOW Blog na Acme-Themes